1 months ago2တစ်နှစ် #1319 by plinux24
ဆက်သွယ်စာမျက်နှာမတည်ရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမည်သူမဆိုဆက်သွယ်ပါလို့မရပါဘူး။ အဘယ်မှာရှိဖိုင်များကိုရှိပါသလဲ အကြှနျုပျ၏ဂျမ်ဘိုမှတ်ပုံတင်ကြေးအလျင်အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ပေမယ့်ငါကဘာမျှမရှိသည်။
1 months ago2တစ်နှစ် #1321 by rikoooo
, plinux24, မင်္ဂလာပါ
သင်ဒေါင်းလုပ်စတင်ရန် link ကို click နှိပ်ပြီးတစ်ချိန်ကသင် screen ပေါ်မှာ error message ကိုသို့မဟုတ်ဘာမှမရသလား
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1324 by plinux24
ဤ site ကယ့်ကိုပေးဆောင်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ယူတာပဲ။ ကိုယ့်တင်သွင်းခြင်းနှင့်ငါကငါရေးသားခဲ့သည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်သုတ်ပု CAPTCHA စစ်ဆေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ hit, သင့်မေးခွန်းကိုမနျးွခငျးကိုလက်စသတ်။ ငါသာ3လကြာမှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းအလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ တဖန်ငါဒီ site ကို အသုံးပြု. မည်မဟုတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘယ်သူမျှမကျွန်မလုံခြုံရေးပြတင်းပေါက်မှာအဆင်ပြေထိမှန်သည့်အခါတစ်ဦးသည်အခြားပြတင်းပေါက်ပေါ်လာ-Up ့ပုံမှန်အားဖြင့်သင်တစ်ဦးကို download တည်နေရာရွေးချယ်ဖို့ရှေးခယျြပေးသောအဘယ်သူမျှမအမှားအယွင်းများရ။ ဒါကဝင်းဒိုးကိုသာစက္ကန့်အနည်းငယ်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားဘို့ကြာရှည်နှင့်ဘာမျှမဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့အဘရောက်ဇာကိုအစဉ်အမြဲဘယ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မေးရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်က default တည်နေရာပုံမှန် Downloads ဖိုင်တွဲဖြစ်ပါတယ်။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် - 1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1325 by rikoooo
ဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်သင့်ရဲ့ပြဿနာဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်အဖြေတစ်ခုပေးဖို့ကျွန်မကိုကူညီကြလိမ့်မည်, အကြှနျုပျကိုသိစေပြီးတော့ start မပါဘူးဆိုရင်, သင်သည် simviation.com သွားပြီးတစ်ခုခုကို download လုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ် 1 တစ်လအကြာအားဖြင့် rikoooo.
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1336 by plinux24
ငါ site ကိုမှာ login လုပ်ဖို့မတတျနိုငျဘူး။ ငါမှတ်ပုံမတင်ဘူးလျှင်ကြောင့်နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာ login မှသုံးပါတူညီတဲ့အထောက်အထားများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1337 by guitpik
သင်သည်သင်၏ downloads, folder ကိုစစ်ဆေးခဲ့သလား
1 တစ်လအကြာ 1 တစ်နှစ် #1338 by amberdog1
ငါဂျမ်ဘိုတယ် 1st အချိန်, ငါ၏တစ်ဦး / v ဒေါင်းလုဒ်ပိတ်ဆို့နဲ့ကျွန်မ error message ကိုမခံမယူခဲ့ပါဘူးတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ A / V ကို Disable နှငျ့သငျရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဖိုင်ကို / files တွေကို download လုပ်ပါကြိုးစားပါ။
ဒီကူညီပေးသည်နှင့်မင်္ဂလာ Flyin မျှော်လင့်ပါတယ် :)
0.219 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်